Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fifadian-kanina?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mongol Mooré Myama Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Quiatoni) Zoloa
Neken’Andriamanitra ny fifadian-kanina, tamin’ny andron’ny Baiboly, raha antony tsara no nanaovana azy. Tsy nankasitrahany kosa ilay izy raha antony ratsy no nanaovana azy. Amin’izao fotoana izao kosa, dia tsy mandidy ny olona hifady hanina ny Baiboly sady tsy manakana an’izay te hanao an’izany.
Inona no nahatonga ny olona fahiny hifady hanina?
Mba hahazoana fanampiana sy tari-dalana avy amin’Andriamanitra. Nifady hanina ny olona nanao dia ho any Jerosalema mba hampisehoana fa tena mitady ny fanampian’Andriamanitra izy ireo. (Ezra 8:21-23) Nifady hanina koa indraindray i Paoly sy Barnabasy rehefa hanendry mpiandraikitra eo amin’ny fiangonana.—Asan’ny Apostoly 14:23.
Te hifantoka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Nifady hanina 40 andro i Jesosy taorian’ny batisany satria te hiomana amin’ny fanompoana miandry azy, izany hoe ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra.—Lioka 4:1, 2.
Mba hampisehoana hoe nibebaka tamin’ny fahotany. Nampiasa an’i Joela mpaminany Andriamanitra mba hiteny tamin’ny Israelita nivadika hoe: “Miverena amiko amin’ny fonareo manontolo ... ka mifadia hanina sy mitomania ary midradradradrà.”—Joela 2:12-15.
Mba hitandremana ny Andro Fandrakofam-pahotana. Nomena lalàna ny firenen’Israely hoe tsy maintsy mifady hanina izy ireo amin’ny Andro Fandrakofam-pahotana fanao isan-taona. * (Levitikosy 16:29-31) Neken’Andriamanitra ilay fifadian-kanina satria nampahatsiahy ny Israelita fa tsy lavorary izy ireo ary mila ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra.
Inona avy ireo antony ratsy mahatonga ny olona hifady hanina?
Te hisehoseho. Nilaza i Jesosy fa tsy tokony hisehoseho ny olona mifady hanina fa Andriamanitra ihany no tokony hahita hoe mifady hanina izy.—Matio 6:16-18.
Te hiseho ho olo-marina. Tsy hoe lasa olo-marina kokoa na tia an’Andriamanitra kokoa noho ny hafa ny olona mifady hanina.—Lioka 18:9-14.
Te hanonitra ny fahotana miverimberina iniana atao. (Isaia 58:3, 4) Ny olona mankatò sy mibebaka amin’ny fony ihany no ankasitrahan’Andriamanitra rehefa mifady hanina.
Te hanaraka fombafomban’ny fivavahana fotsiny. (Isaia 58:5-7) Toy ny raim-pianakaviana Andriamanitra, ka tiany raha tia azy amin’ny fo ny zanany fa tsy hoe rehefa terena vao hampiseho fitiavana azy.
Tsy maintsy mifady hanina ve ny Kristianina?
Tsia. Tsy maintsy nifady hanina ny Israelita nandritra ny Andro Fandrakofam-pahotana satria izay no notakin’Andriamanitra. Efa nesorin’i Jesosy mandrakizay anefa ny fahotan’ny olona mibebaka, ka tsy ilaina intsony ny mitandrina ny Andro Fandrakofam-pahotana. (Hebreo 9:24-26; 1 Petera 3:18) Anisan’ny Lalàn’i Mosesy ny fitandremana ny Andro Fandrakofam-pahotana, nefa tsy asaina mitandrina ny Lalàn’i Mosesy intsony ny Kristianina. (Romanina 10:4; Kolosianina 2:13, 14) Na izany aza dia anjaran’ny Kristianina tsirairay ny manapa-kevitra raha hifady hanina izy na tsia.—Romanina 14:1-4.
Eken’ny Kristianina fa tsy hoe ny mifady hanina no zava-dehibe indrindra eo amin’ny fivavahany. Tsy mifandray mihitsy ny fifadian-kanina sy ny fifaliana, ao amin’ny Baiboly. Tokony hahafaly anefa ny fanompoana an’Andriamanitra satria i Jehovah dia “Andriamanitra falifaly.”—1 Timoty 1:11; Mpitoriteny 3:12, 13; Galatianina 5:22.
Hevi-diso momba ny fiheveran’ny Baiboly ny fifadian-kanina
Hevi-diso: Nanoro hevitra ny mpivady mba hifady hanina ny apostoly Paoly.—1 Korintianina 7:5, Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques (anglisy).
Marina: Tsy misy teny hoe fifadian-kanina ao amin’ny 1 Korintianina 7:5 rehefa jerena ny sora-tanana tranainy indrindra amin’ny Baiboly. * Nanampy teny hoe fifadian-kanina ny mpanao dika soratra, ao amin’io andininy io sy ao amin’ny Matio 17:21 sy Marka 9:29 ary Asan’ny Apostoly 10:30. Fandikan-tenin’ny Baiboly maro amin’izao no efa nanala an’ireo teny natsofoka tsy araka ny tokony ho izy ireo.
Hevi-diso: Tokony hifady hanina ny Kristianina ho fahatsiarovana ny fifadian-kanina 40 andro nataon’i Jesosy tany an-tany efitra taorian’ny batisany.
Marina: Tsy nandidy ny olona hifady hanina toy izany i Jesosy, sady tsy hita ao amin’ny Baiboly koa hoe nanao an’izany ireo Kristianina voalohany. *
Hevi-diso: Tokony hifady hanina ny Kristianina mandritra ny fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy.
Marina: Tsy nandidy ny mpianany i Jesosy hoe tokony hifady hanina izy ireo rehefa hahatsiaro ny nahafatesany. (Lioka 22:14-18) Nilaza i Jesosy hoe hifady hanina ny mpianany rehefa maty izy. Nilaza ny zavatra hitranga fotsiny anefa izy tamin’izay fa tsy hoe nanome didy azy ireo. (Matio 9:15) Ny Baiboly aza nilaza hoe tokony hisakafo any an-tranony izay Kristianina noana, alohan’ny hanatrehany ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy.—1 Korintianina 11:33, 34.
^ feh. 5 Nilaza tamin’ny Israelita Andriamanitra hoe “hampijaly tena hianareo” amin’ny Andro Fandrakofam-pahotana. (Levitikosy 16:29, 31, Fandikan-teny Katolika) Ny fifadian-kanina no tiany hotenenina amin’izany. (Isaia 58:3) Toy izao no andikan’ny Dikan-teny Anglisy Maoderina an’ilay andininy: “Tsy mahazo misakafo ianao mba hampisehoana hoe malahelo noho ny fahotanao.”
^ feh. 13 Jereo A Textual Commentary on the Greek New Testament nataon’i Bruce Metzger, Fanontana Fahatelo, pejy 554.
^ feh. 15 Izao no lazain’ny New Catholic Encyclopedia momba ny niandohan’ny Karemy 40 andro: “Herinandro, fara fahelany, ny faharetan’ny fifadian-kanina niomanana ho amin’ny fetin’ny paka, tamin’ny taonjato voalohany ka hatramin’ny taonjato fahatelo, fa iray andro ka hatramin’ny roa andro ihany no nahazatra. ... Ny fifanekena fahadimy tamin’ny Konsilin’i Nicée ([taona] 325) no niresaka voalohany momba an’ireo 40 andro ireo. Mbola miady hevitra anefa ny manam-pahaizana sasany hoe Karemy tokoa ve no tiana holazaina eo.”—Fanontana Faharoa, Boky Faha-8, pejy 468.
Hizara Hizara Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fifadian-kanina?
ijwbq no. 139
Nahoana no Tsy Nifady Hanina ny Mpianatr’i Jesosy?
Hamela ny Heloko ve Andriamanitra?